လက်ရှိ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် နည်းနည်းသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိဘဏ်စနစ်မှာ Acc No 12345 ကို လှူလို့ရပါတယ်ဆိုပြီး မောင်မောင်က အလှူခံတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် လူတွေသိမှာက မောင်မောင်ရဲ့ Acc က 12345 ပါဆိုပြီးသိသွားပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ မောင်မောင့်မှာ စုစုပေါင်းပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ် ဘယ်သူတွေ(ဘယ်အကောင့်တွေ)ကလှူတယ်ဆိုတာရယ်(အဝင်) မောင်မောင်ဘယ်သူတွေကိုပိုက်ဆံလွှဲတာရယ်(အထွက်)ကို မောင်မောင်ရယ် ဘဏ်ရယ်ပဲသိပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘဏ်ကမောင်မောင့်အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်တာမျိုး မောင်မောင့်ကိုလှူတဲ့အကောင့်စာရင်းကို သူများကိုပြတာမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ ဘဏ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေပါတယ်။…
Bitcoin ဆိုတာ centralized server မပါပဲ peer to peer ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း centralized server မပါပဲ p2p သွားတာ security issue တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဘာကိုမှယုံလို့မရပါဘူး အဲ့ဒါကို Bitcoin က decentralized system ကြီးမှာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းထားလဲဆိုတာကို ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။…
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအများစုမှာတွေ့ရကတော့ အခြေခံဥပဒေ ဘယ်လိုကွာကွာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ၂ ပါတီပဲ ပြိုင်ကြတာပေါ့။ အကြမ်းဖျဉ်းခွဲမယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်ခွင့်၊ လူအခွင့်အရေးအစရှိတာတွေကို အလေးပေးတဲ့ လက်ဝဲ နဲ့ အမျိုးသားရေး၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဦးစားပေးတဲ့ လက်ယာ ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆို ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ ရီပါဗလစ်ကန်ပါတီ နှစ်ခုပေါ့။ ဗြိတိန်မှာဆို လေဘာပါတီနဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါရီပေါ့။ လက်ဝဲ လက်ယာဆိုပေမဲ့ တစ်ချိန်လုံး လူအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသားရေးနဲ့…
ပထမဆုံး လေယာဉ်လက်မှတ်ကို flymya ကနေဝယ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေက ထုံးစံအတိုင်း cancel ဖြစ်တာတွေများလို့ တစ်ခါတည်း checkout မလုပ်ပဲ confirm ဖြစ်မှ ပေးတာပိုအဆင်ပြေတယ်။ confirm ဖြစ်တာနဲ့ ဖုန်းဝင်လာပြီး…
Application တွေစရေးတုန်းက update ပေးတဲ့အခါ 1, 2,3ဆိုပြီးတိုးသွားတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း 1.1, 1.2 …
YBS ကိုမစီးရပေမဲ့ ၂၀၁၇ မှာ နေ့တိုင်းနီးပါး အပြင်ထွက်နေရတာကြောင့် YBS ကိုလမ်းမှာ တွေ့ရပြန်တယ်။ ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိတာက…
It was at the midnight when I received an important email that I needed to forward to my partner. I was too lazy to open my laptop for suchasimple task as email forwarding and it was my phone that notify me. So, I unlocked my phone, open Google’s…